दशैलाई कसरी मनाउने
२o७४ असोज १२ बिहीबार
काठमाडौँ । नेपालमा दशैको लहर चलेको छ । दशैलाई राष्ट्रिय चाड मानिन्छ । यसलाई नेपालमा दुई तरिकाले हेर्ने गरेको पाइन्छ । एउटा धार्मीक दृष्टिकोण र अर्को प्रगतिशिल दृष्टिकोण नेपालमा यसको प्रमुख मान्यता धार्मिक नै छ । अहिलेसम्म धार्मिक पक्ष लाई नै महत्व दिइदै आइएको छ । यसलाई त्यहि रुपमा मनाउदै आइरहेका छौ । यसलाई हामी माक्र्सवादीहरुले फरक रुपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
यसलाई पुरानै तरिकाले निरन्तरता दिने कि यसमा भएका सकारात्मक पक्षहरुलाई आत्मसाथ गरेर जाने भन्नेमा हामीहरु प्रष्ट हुनु पर्छ । जनमतका आधारमा भन्ने हो भने अहिले नेपालमा करिब करिब ६४ प्रतिशत कम्युनिष्टहरुको जनमत रहेको छ । यो जनमत भनेको छ अहिले सम्म चल्दै आएको रुढीवादी,धार्मिक परम्परा भन्दा फरक हुन खोज्नेहरुको जनमत हो ।
यसमा धेरै कुराहरु मिथक छन् । यसमा देवि देउताहरुलाई सबै कुरा पुरा गर्ने रुपमा लिइएको छ । जुन पुरा अन्धविश्वास हो । अझ यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ कि राज्य संचालनको एउटा विधि नै देविदेउतालाई देखाएर शासकले शासन गर्ने बाटो बनाएका हुन ।
लेखक : अनिता गिरी
यसको धार्मिक,सांस्कृतिक र प्राकृतिक रुपमा गहिरो गरी व्याख्या हुन अहिलेपनि आवश्यक छ । यसको निरन्तरता नै हो अथवा यसमा केहि परिवर्तन आउनु पर्छ ? अहिले होइन यसमा बहस भने पहिला देखिन भएको केहि पुस्तकको अध्ययन गर्दा देखिन्छ । अझ माक्र्सवादी पक्षका लेखकहरुले यसमा फरक धारणाहरु राखेका छन् । यसमा परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गरेका छन् । तर पनि ६४ प्रतिशत जनमत भएका कम्युनिष्टहरुले दशैलाई किन नयाँ तरिकाले मनाउन सकेनन । अथवा यसको वास्तविकता जनतामा पुगाउन सकेनन । खोजीको र चासोको विषय यो पनि छ ।
अब यहाँ कुरा दशैको पक्ष विपक्षमा मात्र होइन हामी समाजवादीहरुको अबको सांस्कृतिक यात्रा कता हो ? सामन्तवादको नाइके राजतन्त्रको विदाइ भएको पनि एक दशक भयो । अब यो देशमा सामन्तवादको नायक छैन । तरपनि सामन्तवादले स्थापना गरेका धेरै मूल्यमान्यताका बाहक बनेका छौ । किन हामी यसमा परिवर्तन ल्याउन चाहदैनौ ? हो बर्षायाम सकिएर शरद ऋतु सुरु हुन्छ । नयाँ ऋतुको आगमनसंगै नयाँ अन्नबाली भित्रयाउने समय हुन्छ । यसलाई हामीले धार्मिक रुपमा भन्दा पनि प्राकृतिक र खाद्यान्नसंग जोडेर किन हेर्न सकेका छैनौ । किन अहिलेपनि मर्यादापुरुष रामको विजयसंग जोडेर हेरिन्छ । किन अहिलेपनि महिषासुर राक्षस देवि भगवतिको हातबाट मारिएको भनि हामी निरन्तरता दिइरहेका छौ ।
अहिलेपनि दशैमा जनवारहरुको बलि दिएर देवि देउता खुशि बनाउने चलन छ । यो चलन धार्मिक र सांस्कृतिक रुपमा एकदमै रुढीवादी छ । यदि यो एक्काइसौ शाताब्दीमा पनि ढुङगाका मुर्ति अगाढि जनावरको बलि दिएर शक्ति आर्जन हुन्छ भनेर हामी चल्ने हो भने के साच्चै हामी कम्युनिष्ट हुन सक्छौ । कम्युनिष्ट हुनु भनेको सबै कुराको विरोध गर्नु पर्छ भन्न खोजेको होइन । तर पनि हामीले चलाएका चलन चल्तीहरु कति वैज्ञानीक छन् कति समाजलाई प्रगतिको बाटोमा डो¥याउने खालका छन् यसको मूल्याङकन गर्न सक्नु पर्छ ।
हो हिलो धुलो काम सकेर ऋतु परिवर्तन भएको समय हो । नयाँ अन्न पाक्ने समय हो । यसलाई आराम गर्ने पर्वको रुपमा पनि लिएका हुनसक्छन् । किसानहरुकालागि मौसमका हिसाबले राम्रो मौसम हो । यहि मौसममा चाडबाडको रुपमा दशै मान्न थालेका हुनसक्छन् । अहिलेपनि यो चाडलाई यहि रुपमा मनाउन सकियो भने सबै नेपालीलाई अपनत्व हुन्छ ।
तर यहाँ त यो चाडलाई केवल हिन्दुहरुको चाडको रुपमा मनाइन्छ । देश धर्म निरपेक्ष हुने । हाम्रा नेताहरु यहि कुरालाई धेरै ठूलो उपलब्धीको रुपमा प्रचार गर्ने तर दशै आउदा नेपालीहरुको चाड होइन हिन्दुहरुको चाँड भन्दै पुन तीन नेताहरु शुभकामना आदन प्रदान गर्नमा व्यस्त देखिन्छन् । यो विचार एक र व्यवहार अर्को हो । यसलाई विचार अनुसारको व्यवहार अनुसार लैजानु पर्छ ।
दशैका सबै पक्ष नराम्रा छन् भन्न सकिदैन । केहि नभएपनि बर्षमा एक पटक सबैको जमघट हुन्छ । यसले भावनात्मक एकता । सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्धमा एकता ल्याउछ । समबन्धहरुमा नयाँ आयाम थपिन्छ । पुराना पिढीहरुका अनुभवहरु धारणाहरुले नयाँ पिढीलाई शिक्षित बनाउने काम गर्छ ।
सामथ्र्य देखाउने माध्यम बनेको दशै
सुन्छौ हामी भन्दा पहिलाको पुस्ताले बुबा,आमा बाजे बज्यैको पुस्ताले नयाँ लुगा लगाउन,मासु खान दशै कुर्नु पथ्र्यो । त्यहि भएरपनि दशैको महत्व छ । नयाँ लुगा बर्षमा एक पटक भएपनि मासु भात खान पाइन । मिठो मसिनो खान पाइने भएर । तर अहिले त यो दशै उल्टो भएर आए जस्तो पनि लाग्छ । समय फेरिएको छ । समय फेरिएसंगै मान्छेका विचार बानि व्यहोरा फेरीएका छन् । हिजो गरीबहरुकालािग केहि खुशि लिएर आउने दशै आज दशा बनएर आउने गरेका कयौ उदाहरणहरु देखिन्छन् ।
दशै कसैकोलागिपनि दशा नबन्ने अबस्थामा मनाउने वातावरण बन्नु पर्छ । धनी र गरीबबिचको जुन खाडल त त्यहि अनुपातमा दशैलेपनि प्रतिनिधित्व गर्न थालेको छ । यसले समाजलाई जोड्छ कि तोड्छ ? मलाई लाग्छ यसले समाजलाई वर्गीय विभेदको खाडलमा हाल्छ ।
गच्छे अनुसारको बनाउनु पर्छ
छिमेकीले दशैका मार्न किनेको खसि भन्दा आफ्नो खसि कुनै पनि हालतमा सानो हुनुहुदैन भन्ने मानसिकता छ । यो भनेको फजुल खर्चको मानसिकता हो । खाने भनेको त परिवार संख्या हेरेर हो । तर हामीहरु यो सोचमा छैनौ । धाकको मानसिकता छ । समाजमा मानिएका गनिएका मानिसहरु झन अगाडि देखिन्छन् यस्तो काममा । हुन् पर्ने समाजका अगुहरुले समाजमा आउने भित्रिने बिकृति बिसंगतिलाई रोक्नु हो । अझै पढेलेखेका युवाहरु र अझ आफुलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरु पनि फजुल खर्च र दशै तामझामका साथ मनाउन थालेका छन् । हामीले कुन संस्कृति र संस्कार सिकाउदै छौ भन्ने हेक्का सम्म राख्दैनन । अझ कसैले सोधि हाल्यो भने समाज अनुसार चल्नै प¥यो भन्छन् । समाज अनुसार चल्ने नेतृत्वले कसरी समाजको देशको नेतृत्व गर्न सक्छ ? कसरी समाजअनुसार चल्ने नाममा रुढीवादी र धार्मिक मूल्यमान्यताको बाहक बन्ने नेता कम्युनिष्ट हुनसक्छ । कसरी प्रगतिशिल हुन सक्छ ।
प्रगतिशिल भनेको नराम्रोको विरुद्ध नयाँ स्थापित गर्नु होइन र ? हो भने दैविक शक्तिले समाजपरिवर्तन हुन्छ र समृद्धि हुन्छ भनेर मान्छौ भने हामी कुन दर्शन र कुन विचारका अनुयायी हौ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
मुखले सर्वहार,किसान,गरीब र मजदुरका कुरा गर्ने व्यवहार पूँजीपतिका जस्तो गर्दा समाजले हामीबाट के सिक्छ । के सिकाउदै छौ । दशैको नाममा भइरहृका विकृति विसंगतिका हामी बाहक बनिरहदा सम्म कसरी प्रगतिशिल र कम्युनिष्ट हुन्छौ ।
समाजमा दशैको नाममा जुवा तास,विकृति विसंगति चलिरहले हामी मुकदर्शक बन्ने अनि समाज कसरी परिवर्तन हुन्छ । समाजलाई त गलत बाटोमा हिड्नबाट रोक्नु पर्छ ।
समाजमा चाडबाडमा नहुनेहरुको लागि अभिसाप बनिरहेको छ । यसमा ध्यान जानु पर्छ । नहुनेले आफुलाई समाजमा कमजोर असाय सम्झन्छ । हुने खानेहरुको धाक धम्कीको अगाडि निरही देखिन्छन् । चाडबाडमा फुर्ति देखाउने प्रवृतिले एकता होइन विभाजन नै ल्याउछ । यस्तो कुरा नगर्न हामीले झन सचेतना फैलाउन आवश्यक छ ।
कम्युनिष्टहरुले शुभकामना आदान प्रदानको नाममा ठूल ठूला पार्टी प्यालेसमा गर्ने कार्यक्रमले कसलाई फाइदा भइरहेको छ । त्यहि पूँजीपति व्यापारीलाई । हुनु पर्ने हामी कम्युनिष्टहरुले गरेका सम्पूर्ण कार्यक्रम गरीब,किसान मजदुरको पक्षमा हो । तर यी ठूलठूला प्यार्टी प्यालेसमा हुने श्भकामना आदान प्रदानमा ती मजदुर किसान र गरीब आउछन् । आउदैनन भने हामीले दिएको शुभकामना कसलाई हो यतिको फजुल खर्च गरेर ।
त्यसैले सकिन्छ भने यस्ता चाडबाडहरुलाई हामीले कम खर्चिला,कम विकृति विसंगति युक्त,सदभाव ,एकता भातृत्वको चाडको रुपमा मनाउनु पर्छ । नकि औकात आक्ने रुपमा ।
अझ हामी कम्युनिटहरुले त यस्तो विदालाई सदुपयोग गरेर राजनैतिक र वैचारीक प्रशिक्षण चलाउन सक्दा झन राम्रो हुन्थ्यो । पार्टीका निति तथा कार्यक्रम देशभरी सप्रेक्षण हुने गरी बहस छलफल गर्नु पर्छ । दशै सबैलाई भातृको चाड बनाउनुपर्छ । समृद्धिको चाड बनाउनु पर्छ । समानताको चाड बनाउनुपर्छ यहि शुभकामना छ दशैको ।
(लेखक अनेरास्ववीयुको विदेश विभाग सचिव हुन् ।)
दशैं का लागि बसको अग्रिम टिकट खोल्न यातायात व्यवसायी तयार, असोज ५ गतेदेखि बुकिङ खुल्ने
काठमाडौं। दशैका लागि बसको अग्रिम टिकट असोज ५ गते देखि खुल्ने भएको छ । यातयात व्यवस्था विभागमा आइतबार भएको छलफलमा यातयात व्यवसायी अग्रिम टिकट खोल्न सहमत भएका हुन् । छलफलमा
दोलखा। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको शेयर दशैँपछि बाँडफाँड हुने भएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि निष्काशन गरेको शेयर बाँडफाँड दशैँपछि गरिने सो आयोजनाका प्रवक्ता डा गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए
दशैँअघि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ नआउने
सुन्दरीजल, काठमाडौँ। उपत्यकावासीको प्यास मेटाउन मेलम्चीको पानी ल्याउन निर्माण भइरहेको सुरुङको काम सम्पन्न गर्न अझै केही समय लाग्ने भएको छ । इटालीको निर्माण कम्पनी को–ओपरेटिभ मुराटोरी सेमेन्टिस्टी दि रभेन्नासँग थप